एन्फाले यु–१३ खेलाडी छनौट गर्ने – Khel Dainik
एन्फाले यु–१३ खेलाडी छनौट गर्ने
काठमाडौं (खेलदैनिक) । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले अन्डर–१३ का युवा फुटबल खेलाडीहरु छनौट गर्ने भएको छ । आगामी बर्षदेखि क्लबहरुसँग सहकार्य गरेर एकेडेमी सञ्चालन गर्न लागेको एन्फाले त्यसैका लागि यु–१३ खेलाडीहरु छनौट गर्न लागेको हो ।
खेलाडीहरुको छनौट खुला रुपमा गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको एन्फाले जिल्ला छनौट कार्यक्रम यहि माघ महिनाको अन्तिमसम्म गर्ने जनाएको छ । साथै त्यसका लागि सम्बन्धित जिल्ला फुटबल संघसँग सम्पर्क राख्न पनि एन्फाले सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।
उद्देश्य एएफसी क्लब लाइसेन्स
एएफसीले क्लब लाइसेन्स नभएकै कारण नेपाली क्लबहरुलाई आफूले आयोजना गर्ने फुटबल गतिविधीहरुमा समावेश नगर्ने निर्णय गरेपछि नेपाली फुटबललाई नराम्रो धक्का लागेको थियो । नेपालमा लिग समापन भएर पनि क्लब लाइसेन्स नपाउँदा नेपाली क्लबहरुले प्रतिष्ठित एएफसी कप पनि खेल्न सकेका थिएनन् ।
एएफसी क्लब लाइसेन्सका लागि मुख्य मापदण्ड भनेकै क्लबको आफ्नै एकेडेमी र खेलमैदान हुनुपर्ने थियो । जसमा नेपालका अधिकांश शिर्ष क्लबहरु चुकेका थिए । तर हालै नेपालको त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले सबै मापदण्ड पूरा गर्दै एएफसी क्लब लाइसेन्स पाउने पहिलो नेपाली क्लब पनि बनेको थियो । योसँगै अन्य नेपाली क्लबहरुमा पनि क्लब लाइसेन्स पाउने आशा पलाएको थियो ।
त्यस्तै एकेडेमी सञ्चालन कै लागि अर्का दुई विभागीय टोली एपिएफ क्लब र पुलिस क्लबले पनि हालै एन्फासँग सम्झौता गरेका थिए । एएफसी क्लब लाइसेन्सका लागि अन्य शिर्ष क्लबहरु पनि प्रयासरत छन् । त्यहि उद्देश्यलाई ध्यानमा राख्दै एन्फाले क्लबहरुसँग सहकार्य गरेर एकेडेमी सञ्चालन गर्न लागेको बताइएको छ ।
सहभागी हुन चाहने खेलाडीहरुको योग्यता
एन्फाले जारी गरेको सूचनामा जनाइअनुसार यु–१३ छनौटका लागि युवा खेलाडीहरुको जन्ममिति २०६५ असोज १५ देखि २०६६ असोज १४ को बीचमा हुनुपर्नेछ । साथै खेलाडीहरुले आफ्नो नाम दर्ता गर्दा अनिवार्य रुपमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ ।
← मकवानपुरमा प्रशिक्षण केन्द्र बनाउँछौंः शेर्पा हारबाट जोगियो पुलिस, एपिएफको जितको ह्याट्रिक →
आहा! रारा गोल्डकप दर्शकले रंगशाला मै गएर हेर्न पाउने माघ १३, २०७७
कस्तो छ नेपालसँग भिड्ने मौरिसियन टिम ? माघ १३, २०७७
नेपाल आइपुग्यो मौरिससको फुटबल टोली माघ १३, २०७७
मच्छिन्द्र आहा! रारा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा माघ १३, २०७७
राष्ट्रिय महिला फुटबल लिग स्थगित माघ १३, २०७७
दावेदार मनाङ सेमिफाइनलमा माघ १३, २०७७